Dhammaan saaxiibadaydu waxay ku jiraan barnaamijka Lovoo. Maxay tahay midaasi? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay 15 sanno jir. Waxaan lahaa uur waana joojiyay uurka. Dadka kale ee jooga iskuulka waxay igu dhahaan in aan ahay qof dilaa ah, oona dilay ilmahayga.
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno-jir ah waxaana shalay galmo la sameeyay saaxiibkayga markii ugu horaysay. Waxaan jeclaystay in aan ka qubeysto kadib galmada, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan nadiif ahaado. Laakiin ma hubi in uu saaxiibkayga midaasi u arkayo in ay tahay dabaalnimo iyo inkale. Dadka kale maxay sameeyaan?